Horizontal Bar / sinnayn
nuurad lahayn Box
Qalabka kale ee qalaama
Sale Hot Basketball Hoop
Shahaado Kubadda Koleyga La Xaqiijiyay
Gudaha Basketball Hoop
Bannaanka Basketball Hoop
Kubbadda Koleyga Laqaadi Karo
Haydarooliga Basketball Hoop
Kubadda Koleyga Kubadda Koleyga
Wall & Saqafkii Fardoolayda Basketball Hoop
Kale Basketball Hoop
Qalabka kale ee Kubadda Koleyga lagu ciyaaro
Basketball lagu seexiyo
Basketball toogtay Clock & Scoreboard
Kids Jimicsigga Mats
Kale Jimicsigga Mats
Tennis / Laliska / Badminton Qalabka
Bannaanka Fitness Qalabka
Track Oo Field Qalabka
Sababta Ugu Weyn Ee Loo Iibsado Kubadda Koleyga Hoop La Qaadan Karo
by Caweyska Dalmar 20-09-04
Sababta ugu weyn ee taribuunka kubbadda koleyga ee la qaadan karo ay caan ku yihiin ayaa ah inay bixiyaan fudeyd badan, dabacsanaan marka la ciyaarayo kubbadda koleyga. Hoolka kubbadda koleyga ee la qaadan karo ayaa adiga iyo carruurtaada ka caawin doonta hagaajinta xirfadaha kubbadda koleyga intii aad aadi laheyd qolka jimicsiga, sidoo kale waa hab fiican oo aad jimicsi kula sameysid Adiga ...
Habeennadayada LDK-ga ayaa habaynno qaabab kala duwan oo ah jimicsiga jir-dhiska
by LDK 20-08-28
Matxafka jimicsiga waa qalab lagama maarmaan u ah ku tababbarashada jimicsiga jimicsiga, jimicsiga hawada, iyo ku boodida isboortiga. Matxafka jimicsiga waa inuu noqdaa mid aan sun lahayn, aan dhadhan lahayn oo dabacsan. Si tartiib ah ugu riix dusha sare ee jooniska jimicsiga iyada oo calaacasha gacanta si aad u dareento dareen qallalan. Haddii ay jiraan wax aad u badan oo xumbo leh oo t ...
AAP waxay soo saartaa hagida si loo hubiyo in carruurtu si nabdoon u jimicsadaan inta lagu jiro COVID-19
by LDK 20-08-21
Maaddaama tirada kiisaska COVID-19 ay sii kordhayaan doodaha ku saabsan ku-laabashada dugsiga oo sii kordheysa, su'aal kale ayaa weli jirta: Tallaabooyin noocee ah ayaa la qaadayaa si loo ilaaliyo carruurta markay ka qeybgalayaan cayaaraha? Akademiyada Caruurta ee Mareykanka ayaa soo saartay tilmaamo kumeel gaar ah oo ...
Habka rakibida ee kubbadda koleyga go'an ee dhulka hoostiisa taagan?
by LDK 20-08-14
Kubadda kubbadda koleyga gudaha ah ee go'an waa nooc ka mid ah kor u qaadista kubbadda koleyga gudaha dibedda. Waa in la aaso qayb ka mid ah kolayga kubbadda koleyga dhulka si loo garto hagaajinta loona garto adeegsiga hoobka kubbadda koleyga.
Mashiinnada Wajiga ee Maskaxda ah ee loo yaqaan 'KN95 Wejiga Maska' ayaa Loogu Baahan Yahay Noloshaada Maalinlaha ah!
by LDK 20-08-07
Marka hore, waxaad ubaahantahay inaad “gacmahaaga dhaqso ugu yaraan” saabuun ugu yaraan 20 ilbiriqsi, Labaad, marka aad ka maqantahay guriga, waa inaad “iska ilaalisid inaad dadka kale la xiriirto” kana fogaatid ugu yaraan 6 fiit qof kasta. , waxaad ubaahantahay inaad “afkaaga iyo sankaaga ku dabooashid xarig ...
Trampoline waa hab wanaagsan oo jimicsi lagu ciyaaro！ Ku ciyaar gurigaaga gadaashiisa!
by LDK 20-07-31
Trampoline waa hab wanaagsan oo jimicsi lagu sameeyo, waxayna ku keentaa xiiso badan. In kasta oo trampolines-ku ay wax weyn u yihiin carruurta, dadka waaweyn ayaa sidoo kale ku raaxeysan kara tamar-goosadka. Xaqiiqdii, weligaa gabow noqon doontid. Waxaa jira noocyo badan oo trampolines ah, laga bilaabo xulashooyinka aasaasiga ah ee carruurta iyo moodallo waa weyn kuwa ka qaybgalaya wada ...
Nidaamka Suuqa Kubadda Koleyga ee Laqaado La Qaadan Karo Waa Waxa Aad U Baahan Tahay Maalmahan!
Wadarta kiisaska coronavirus ee adduunka ayaa ka badan 17 milyan, iyo 4.5 milyan oo Mareykanka ah. Sida laga soo xigtay warbaahinta Mareykanka, daraasad cusub ayaa muujineysa in haddii dadku inta badan gacmahooda dhaqaan, xirtaan maaskaro, oo ay ka fogaadaan midba midka kale, dabeecadahaan saddexda ah waxay ka hortagi karaan in cudurka coronavirus uu si dhakhso ah ugu faafo ...
403, Dhismaha B, No. 16, Lixin Road, Degmada Longgang, Shenzhen
Us Haddaba Wac: +86 75589896763
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2019: Dhammaan Xuquuqda ayaa Leh. Hot Products, Sitemap, AMP Mobile
Guddiga Spring Jimicsigga Qalabka, boodboodo giringiratay dheer, Qalabka qalaama, isbuunyo xirmo square,